२७ मंसिर २०७६, शुक्रवार | Dec 13, 2019 | 14:46:43
By synergyfm on	 December 14, 2018 रोचक संसार, समाज
विजुलीको पोलले के काम गर्छ ? सोच्नै पर्दैन सबैको उत्तर एउटै हुन्छ बाटोमा तार हरु छरिन बाट जोगाउछ । अझ भनौं सडकमा तारको गन्जागोल हटाई सुन्दर नगर संगै विद्युतीय क्षती कम गरी विद्युतीय वितरण र मर्मत सहज गदर्छ त्यस कारण विजुलीको पोलहरु राखिन्छ । साच्चै यि त मेरो जिवनकालको सोच हो यो सोच र भनाई त मेरो पुस्ताहरुले गर्ने कुरा हो । विजुलीको लागि पोल त मेरो हजुर बुवाको पाला देखिनै थियो त फेरी अनि हजुर बाका पालामा चै विजुलीको पोल प्रति के धारणा थियो होला ? हजुरबा कै पालामा मेरो गाउँमा पनि विजुली थियो रे त मेरो गाउँ मा । तर त्यो बेलामा चाहि विजुलीको पोल नजीक मानिसहरु जान पनि डराउथे रे बा ले भन्नु भाको । किनभने त्यहाँ करेन्ट लाग्छ भन्ने डर थियो, फेरी तपाईले भन्नुहोला काठका खम्बाका विजुलीका पोल हुन्थे त्यसैले मानिसहरु डराएका होलान अहिले त बलिया सिमेन्ट र फलामका विजुली पोलहरु आएका छन् । पहिले त दुई तिन वटा तार मात्र हुन्थे विजुलीका पोलमा अहिले पोलले विजुलीको तार अडाएको हो की बिजुलीको तारले पोल अडाएको हो केहि थाहापत्तो हुदैन । प्रशंग के गर्न खोज्दै थिए कुरो कता पुग्यो । जे होस् प्रशंग विजुलीको पोलकै हो । केहो त विजुलीको पोलको प्रयोग ?
कुरा सम्पन्न चुनाव बाट गरौं । देशमा दुई चरणको ठुलो निर्वाचन भए त्यसको पिडा सबैभन्दा बढि विजुलीको पोललाई परेको देखिन्छ । स्थानिय निर्वाचन होस् वा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा ताका सवै विजुलीको पोलहरु दुलही जस्तै सिगारीएको देखियो । सिन्दुर,चुरा र पोतेले हैननी फेरी विभिन्न दलका रङ्गीविरङ्गी झण्डाले लाग्थो चुनाव विजुलीकै पोलको सहयोगले जित्ने हो । अनि भोट पनि पोल बाटै पाउने हो । जसले विजुलीको पोलमा धेरै झण्डा झुण्डायो जसले विजुलीको पोलमा धेरै पमप्लेट टाँस्योे चुनाव उसैले जित्यो । हुन त यो काम हजुरबाकै पाला देखि सुरुभएको रहेछ मानिस जम्मा हुने चोक नजिकका पोलहरुमा हातले नै लेखेर भनेपनि सुचना टाँस्ने गर्थे रे तर त्यति बेला थोरै मात्र हुन्थे अहिलेत भो कुरै नगरौँ ।
पोलको काम के हो भन्ने नै छैन अहिले बजारको विज्ञापन देखि लिएर पार्टीको नारा समेत विजुलीको पोलमा देखिन्छ । दिसा गरेपछि साबुनपानीले हात धुनुहोस, सार्वजनिकस्थलमा धुमपान नगरौं, फोहोर जताततै नफालौं जस्ता जनचेतना फैलाउने कुरालाई यसरी प्रचार गर्दा सम्म त खासै फरक पर्थेन । यहाँ त निजी स्कुल, कलेज, कन्सल्टेन्सीले बर्षौ देखि विज्ञापनका लागि पोलमा पोस्टर टाँस्ने गरेका छन् ।अनि नेपालका विजुली पोलहरु त संसारकै बलियो खम्बा हो जस्तो लाग्छ । विजुली देखि इन्टरनेटसम्मको तारहरु पोलमा गज्याङगुजुङ, घर घरमा लागिएका बिजुली , केबुल र इन्टरनेटका तार माकुराको जाल जस्तै झुण्डीएको कतिबेला के हुने हो केही भन्न नसकिने । अब यो कुरा छोडौ हिजोआजकै कुरा गरौ केहि दिन अगाडि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम गर्ने क्रममा सरकारले काठमाडौंका गल्लीमा प्रधानमन्त्रीको तस्वीरसहित पोलहरुमा फोटो टाँग्यो । त्यसको लगत्तै कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीकै शैलीमै पोल पोलमा निर्मला तस्विर ‘सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन’ भनेर टाँगिए ।
अच्चम लाग्छ सरकार देखि जनता विजुलीको पोलमा । एक समय सडकमा टायर, ढुङ्गा र मुढा सहित देखिने आक्रोस कम भएको देखिन्छ । तर अनावश्यक रुपमा विरोध संगै विज्ञापनको लागि विजुलीको पोल मा देखिएको दृश्य कति सान्दर्भीक छ ?
प्रबिधि र सञ्चारमा नेपालले नसोचेको फड्को लिदा पनि विजुलीको पोल केका लागि हो ? वर्तमान अवस्थामा कसैले बुझेको पाईदैन । जहाँ कनफ्युज नै कनफ्युज ।अब कुरो आयो सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण, स्थनिय सरकार अर्थात सरोकारवाला निकायहरुको सडकमै लत्रिरहेका, बीचमा तार टुक्रिएर सडकसम्म झुन्डिएको, एउटै पोलमा धेरै तार जेलेर राखिएको अनावश्यक तारले नगरको सौन्दर्यसमेत बिग्रदा समेत कुनै मतलब छैन । कुरा भने विजुली अन्डरग्राउण्ड गरेर तत्कालै तारविहीन नगर बनाउने महोत्वकासी योजना बाढ्दै हिड्छन । एउटा नियकाकोे अर्कोसम्म समन्वय शुन्य छ । जसले गर्दा विजुलीका पोलमा बिद्युतका तार, इन्टरनेटका तार, केबुलका तार छरपस्ट छन् ।
सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन पनि अव्यवस्थित विजुलीका पोलका अनावश्यक तार र होर्डिङ बोर्ड, तुल, ब्यानर, पोस्टर आदी अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । एसियाको दोस्रो गरिब देशका जनता हामी विश्व सामु पर्यटकीय सम्भावना रहेको देश मुख्य सडक कसरी सिंघार्ने उक्त कुराको ज्ञानहुनु आवश्यक छ । सुरुवात आफै बाट गर्नु आवश्यक छ । पक्कै पनि विजुलीको पोल पोलमा लेखेर टाँसेर न समृद्धि आउछ न अधिकार पाईन्छ । यसरी सर्वजनिक स्थल अनि संवेदनशील स्थान, विजुलीको पोलमा कर्तव्यविहिन अधिकार, उत्पादनविनविन वितरण, योग्यताविनाको आकांक्षा र उत्तरदायित्वविनाको कार्यमा रमाउनु हामी सबैका लागि कति सन्दर्भीक होला । बरु विजुलीका पोलमा अनावश्यक तार र तुल, ब्यानर आदी हटाएर सडक बत्ति जडान गर्नसक्ने हो भने कति सान्र्दभीक हुन्थ्यो होला । सजिलै सँग उज्ज्यालो सडकमा यात्रा गर्नु राम्रो की, अनावश्यक रङ्गीविरङ्गी तुल, ब्यानर आदी र गज्याङगुजुङ अनावश्यक तार भएको सडकमा यात्रा गर्नु राम्रो ? स्मार्ट सिटिको चर्चा गर्दै गर्दा सरोकारवाला निकायहरु यस तर्फ गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । सडकका विजुलीका पोलहरु बिज्ञापन गर्ने ठाँउ नबनुन । विजुलीका पोलमा अनावश्यक तार नदेखिउन । यसका लागि हामी सबै एक जुट बनौं ।
लेखक – विवेक पोख्रेल